Qad Tareen Casri ah oo isku Xiraya Ethiopia iyo Djibouti oo xariga Laga Jaray.
Taareenkii ugu horreeyay ee koronto ku shaqeynaya ee qaaradda Afrika ayaa waxaa uu ku ordi doonaa xawaare gaaraya 120 KM saacaddii, isagoo waqtigii safarka ee labada caasimadood dhexdooda ka dhigaya 6-8 saacadood oo qura.
Qadkan tareenka ayaa dhirirkiisu waxuu gaarayaa 800km, Waxaa mashuurcan ku baxaday lacag dhan 4Billon oo dollarka mareynka ah, dhismahan ay fulisay Labo shirkadood oo laga leeyahay wadanka China.
Masuul u hadlay Itoobiya ayaa Waxa uu ka dhawaajiyay in awoodda tareenka ee rakaab uu yahay 3540 rakaab ah, oo loo kala qeybiyaya Labo qeybood oo kala heer sarreeya, qeybta koowaad tirada kuraasta waa 3944, qeybta labaad oo VIP ah waxay leedahay 2596 kursi, iyo makhaayad leh 944 kursi.
Sidoo kale hoggaamiyeyaasha labada dal ee Itoobiya iyo Djibouti waxay sheegeen in jidka cusub ee tareenku uu sii xoojin doono xiriirka ganacsiga ee ka dhaxeeya.
Waxa waddada isticmaali doona rakaabka laba dal isaga gudbaaya iyo waliba ganacsatada alaabta wadata si u xooggayso xidhiidhka ganacsi ee Jabuuti iyo Itoobiya.
Dhanka amniga marka laga eego ayaa mas’uuliyiintu sheegeen inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu amniga badan dunida marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee nabad qabka wadada, waana kan ugu fiican qaaradda afrika guud ahaan mark laga eego dhanka adeegyada rakaabka iyo diyaar garowga dhanka amniga.
Itoobiya ayaa ku tiirsaneyd dekedaha wadanka Eritrea tan iyo markii uu dalkaasi xoriyadda ka qaatay Itoobiya 1991, basle sanadkii 1998 ayaa dagaal u dhaxeeya Itoobiya Eritrea oo dhacay dartii waxay itoobiya loo diiday isticmaalka dekedaha Eritrea oo ay badeecado kala soo degi jirtay, waxayna u wareegtay dhanka Djibuuti oo ay badeecadeeda ugu badan kala soo dagto hadda .
Waddo tareenkan ayaa ah waddadii ugu casrisanayd ee Geeska Afrika waligeed laga dhiso, iyadoo tareenada loogu talagalay in ay isaga gudbaana ay yihiin kuwo aad u casri ah oo nooca dheereeya ah.